बलात्कारीलाई जीवनको हक छ ? |
प्रकाशित मिति :2018-08-01 12:09:40
अन्डरवेयर मात्रै लगाएका एकजना पुरुषलाई जिउँदै जलाउँदै गरेको फोटो झ्वास्स फेसबुकमा देखें । तल लेखिएको थियो बलात्कारीलाई जिउँदै जलाउनुपर्छ । रातीको १० बजे । सुनसान गाउँ । पानी दर्किरहेको छ ।
यो फोटो देखेपछि मेरो मन शान्त हुन सकेन । उकुसमुकुस बढ्यो । किन किन आफूलाई आक्रामक महसुस गरें ।
यो घटनाले म पनि जलिरहेको छु । बलात्कारीलाई पनि जिउँदै जलाउनुपर्छ भनिरहेको छ मेरो अन्तरहृदयले । त्यसैले त्यो तस्वीर डाउनलोड गरें । अनि आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरेँ र लेखेँ ‘हेल्लो सरकार मेरो देशमा पनि बलात्कारीमाथि यस्तै सजाय भएको हेर्न मन छ ।’
रात घर्किसकेकाले यो पोष्ट गर्नेबित्तिकै सुतें । भोलिपल्ट करिब ८ बजेतिर फेसबुक खोल्दा हिजोको पोष्टमा लाईक, कमेन्ट र पोष्टसँगै सम्बन्धित म्यासेज भरिभराउ थिए ।
हो हामी बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गरिरहेका छौँ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र नेपालले १९८४ को यातना तथा क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय नदिने संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिमा सन् १९९१ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेका कारण पनि संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुन सकेन ।
तर, सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका अन्य देश मृत्युदण्ड दिँदा क्रूर र पीडादायी व्यवहार गर्न नपाउने हुनाले मृत्युदण्डका नयाँनयाँ उपायको खोजीमा लागेका छन् । नेपाल भने संयुक्त राट्रसंघको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकै कारण मृत्युदण्डको कानून बनाउन सकिँदैन भनेर पन्छिरहेको छ ।
बलात्कारपछिको पीडाले एउटी नारीले जीवनभर छिनछिन मरेर जीउनुपर्छ । समाजले उनको सम्मानको हक छिन्छ । एउटा खुसी परिवारको हक उनलाई दिँदैन । भलै कानूनले यी कुरा मान्दैन । तर, समाजमा गडेको गलत धारणाले यी कुरा मान्छ ।
अन्यथा नठानी एकपटक सोच्नुस् त, आज सुदूरपश्चिमकी एक बालिका बलात्कृत भईन् । तपाईंका पनि छोरी, आमा, दिदीबहिनी, श्रीमती छन् । उनीमध्ये एक बलात्कृत भइन् भने !
कल्पना गर्नुस् अनि त्यतिबेला हुनसक्ने आफ्नो अवस्थाको महसुस पनि गर्नुस् । र भन्नुस् त बलात्कारीलाई जीवनको हक छ ?